प्रशंगवस : बुझि नसक्नु छ, बुर्तिवाङ (निसीभूजी)को राजनीति ! – ebaglung.com
प्रशंगवस : बुझि नसक्नु छ, बुर्तिवाङ (निसीभूजी)को राजनीति !
२०७६ मंसिर ११, बुधबार ०५:१८	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
बुर्तिवाङ २०७६ मंसिर ११ । आगामी मंसिर १४ गते बागलुङ जिल्लाको क्षेत्र नं २ को (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यको उपनिर्वाचनको लागी मतदान हुँदैछ । बुधबार रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । मतदानको समय नजिकिए सँगै राजनीति दल, उमेदवार र समर्थक शुभचिन्तकहरु आआफ्ने पक्षमा मत जुटाउन भगिरथ प्रयन्तमा छन् । मतदाताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न साम, दाम, दण्ड, भेद सबै अजमाईस भैरहेको छ । सेकेण्ड सेकेण्डमा पारा बदलिरहेको छ, मानौ कुनै रंगमन्चमा क्षणक्षणमा परिवर्तन भैरहने दृश्यहरु जस्तै बुर्तिवाङ (निसीभूजी)को राजनीतिक परिदृश्य पनि चलायमान बनेको छ । हिँजोका जिगरी दोस्त आज पानी बाराबारको अवस्थामा छन् । यहाँ मित्र र मित्रताको कुनै कदर छैन । एकको अर्को प्रति विश्वास छैन । पदकै लागी राजनीतिक सिद्धान्त एवं निष्ठा पनि मर्लक्क बिर्सने यहाँको प्रबृत्तिले देखाएको छ ।
धोकाधडीको राजनीति बुर्तिवाङ (निसीभूजी)मा कुनै नौलो कुरा होईन । २०४६ सालको परिवर्तन पछीको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा यस ३ नं क्षेत्रबाट नेपाली काँग्रेसले रामप्रसाद आचार्यलाई उमेदवार बनायो । उमेदवार आचार्य लगायत जिल्लाका तीनै क्षेत्रबाट उमेदवारी दिएका उमेदवारहरुलाई निधारमा रातो टीका लगाएर काँग्रेसी कार्यकर्ताहरुले बागलुङ बजार परिक्रमा गराएर जुलुस फर्कियाे । आचार्यको नागरिताको प्रमाणपत्र दुईवटा भएको भन्दै काँग्रेसबाटै दाबी बिरोध गरियो र उनको उमेदवारी रद्द गर्ने षडयन्त्र रचियो, फलस्वरुप उनी चुनावी मैदानबाट बाहिरिए । पहिले उठाईयो पछी ढलाईयो, घात अन्तर्घातको राजनीतिमा पनि टाँठाबाठाहरुले बुर्तिवाङ (निसीभूजी) अगाडी नै भएको प्रमाणित गरे ।
ढोरपाटनमा वाम तालमेलले हावा खायो : एमालेबाट देवकुमार नेपालीले मेयरमा दर्खास्त हाले !
यस्तै पछिल्लो स्थानीय तहको गठन पछी ढोरपाटन नगरपालिकाको नगरप्रमुख पदका लागी मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने केहि घण्टा पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता देवकुमार नेपाली एक्कासी एमालेमा प्रवेश गरेर टीका माला सहित उमेदवारी दिन निर्वाचन कार्यालयमा पुगेको दृश्यले स्थानीयबासीलाई चकित बनायो । माओवादी केन्द्रबाट नेपाली, तुलसी अर्याल, चन्द्र अर्याल मध्य एक उमेदवार बन्ने चर्चा चलिरहेकै अवस्थामा नामालुम नेपालीले माओवादी केन्द्रबाट उमेदवारी नपाउने आशंकाले एमालेमा फड्को मारेका हुन् कि ? जेहोस् यो सिद्धान्तगत राजनीति थिएन, अवसरवादी राजनीति बान्की िथयाे । त्यस बखत माओवादी केन्द्रबाट शेरमान घर्ती नगरपमुखको उमेदवार बनेका थिए । यी बुर्तिवाङको राजनीतिक धोकाधडीका दुइ ज्वलन्त उदाहरण मात्र हुन् ।
उपनिर्वाचनमा भएको नेकपा/राजमो समीकरणप्रति ‘दरबार’ असन्तुष्ट !
यस्तै संसदीय निर्वाचनमा पनि यस क्षत्रबाट बागलुङ नगरपालिका अमलाचौरका देवेन्द्र पौडेललाई नेकपाले टिकट दिएर यस क्षेत्रका तमाम नेकपा कार्यकर्ताहरु प्रति कुठाराघात ग-यो । ‘श्रीमान, देबेन्द्र पौडेल प्रतिनिधीसभा सदस्य श्रीमती बलावती शर्मा यस क्षेत्रकी पार्टी प्रमुख ?’ राजनीति शोषणको पनि हद हुन्छ तर यतिसम्म शोषण त अन्य जिल्लाका जनताले व्यहोरेका छैनन होला । यस क्षेत्रका जनताले प्रतिनिधित्व गर्न कहिले पाउलान ? यो गम्भीर विषय बनेको त छ नै, यसले यस क्षेत्रबासीलाई अथाह पीडाबोध भैरहेको छ ।
अहिले आएर मात्र होइन, पन्चायत कालमा पनि निसीभूजीका जनताले राष्ट्रिय पन्चायतमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएनन् । निसीभूजीकाे प्रतिनिधित्व सदरमुकाम बस्नेहरुले गर्दै आए । त्यसपछी भएका निर्वाचनमा पनि कहिले परि थापाले जिसीभूजीको प्रतिनिधित्व गरे त कहिले पाण्डवखानीका निरज पुनले । यस्तो अभिशापयुक्त छ बुर्तिवाङको (निसीभूजीं) को राजनीति ।
अहिले उपनिर्वाचनलाई लिएर बुर्तिवाङ (निसीभूजी)को राजनीति पनि बुझि नसक्नु छ । कात्तिक १७ गतेको होटेल दरबारमा सम्पन्न नेकपा नेता कार्यकर्ताहरुकोे भेलाको निचोड प्रधानमन्त्री केपी ओली र राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी बीच राजमोलाई सहयोग गर्ने सहमतिलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नै पार्टीबाट उमेदवार उठाउने टुंगो लागेको थियो । दुई शीर्ष नेताहरु बीचको सहमति बिरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउदै उमेदवारको लागी चार जनाको नाम केन्द्रमा पठाउने काम भयो । नेकपा केन्द्रबाटै राजमोलाई सहयोग गर्ने निर्णय भएपछी नेकपाको ठुलो पंंक्ति नून खाएको कुखुरा जस्तै भएको चर्चाका बीच नेकपाबाट बिद्रोही उमेदवार उठाउने षडयन्त्र सुरु भयो । कसैले आफ्ना सहयोगीलाई लिएर बागी उमेदवारी दिन बागलुङ सदरमुकाम पुगे भने कोहि बागी दर्खास्त हाल्न पोखरादेखी बागलुङ आए ।
अन्तत: पूर्व माओवादी केन्द्रका शेरमान घर्तीले नेकपाबाट बागी मनोनयन दाखिला गरेर सन्चारमाध्यमहरुमा अन्तर्वार्ता दिँदै चुनाव प्रचारमा हिँडे । निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उमेदवारले आफ्नो मनोनयन फिर्ता गर्ने दिन र समय सीमा घर्की सकेपछी हेलिकप्टरमा बागी उमेदवार घर्तीलाई बागलुङ सदरमुकाम लगियो र बाम गठबन्धनका उमेदवारलाई सहयोग गर्ने एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरियो ।
‘यस्तो विज्ञप्ती त बुर्तिवाङ बजारमै बसेर निकाले हुने थियो नि’ भन्दै निसीभूजीका जनताहरु शेरमानजीले हेलिकप्टरमा बागलुङ गएर विज्ञप्ती निकाल्नु काे रहस्य खाेतली रहेका छन् । ‘यसरी तुम शरणम् पर्नु नै थियो भने सन्चारमाध्यमहरुमा त्यत्रो फुँईकि किन ?’ भनेर कुरा काटी रहेका छन् । अर्कोतिर, आफ्ना राजनीतिक दामलीहरुको बुई चढेर (प्रस्तावक समर्थन लिएर) बागी उमेदवारी दर्ने अनि उनै दामलीहरुलाई एकाखर नसोधी अवशरवादीको संज्ञा दिँदै ‘…आफुले उमेदवारी त्याग गरिसकेको बताउँदै आउँदा पनि, केही मान्छेहरु बाँदरहरुको जस्तो प्रवृत्ति देखाउँदै हिडेको…’ आरोप लगाउन सरम नमान्ने अवशरबादी प्रबृत्ती बुर्तिवाङमा देखिएको टिप्पणी सँगै ‘बाँदर को ?’ को प्रश्न पनि उठाईएको छ ।
क्लिप चिन्ह अँकित सामाग्री सहित अर्याल दाजुभाई गाउँगाउँमा !
‘कहिँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा…’ भने जस्तै उमेदवारीबाट पछी हटेका शेरमानजीका पक्षधरहरु उनको निर्वाचन चिन्ह ‘क्लिप’ बोकेर मत माग्दै एक नगरपालिका र दुई गाउपालिकामा अनवरत प्रचारमा खटिएका छन् । यिनीहरुको बागी तेवरलाई नियाल्नेहरु ‘क्लिपले कस्लाई स्लिप पार्ला ?’ भन्ने तर्कहरुपनि गरिहेका छन् । यसै कुरालाई निहुँ बनाएर बागलुङ पश्चिमका बामहस्तीहरु (नेकपा जिल्ला सदस्यहरु) तुलसी अर्याल र ददिराम अर्याललाई पार्टी (नेकपा) जिल्ला कमिटीले पार्टीबाट निष्काशित र निलम्वनको निर्णय गरेको छ । बागी अवधारणाका जन्मदाताहरुबाट अर्याल बन्धुहरुलाई कार्बाही गरेर ‘धान खाने मुसो, चोटपाउने भ्याकुतो’ उखानलाई चरितार्थ पार्दै पछीको लागी मार्ग निस्कंटक बनाउने षडयन्त्रको सुत्रपात भएको नेकपा भित्रै टीका टिप्पणी भैरहेको छ ।
उपनिर्वाचनमा निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन गरिएको छ । नगरप्रमुख नेपालीले उत्तरगंंगा माविमा निर्माण गरिएका दुई भवनहरुको उद्घाटन गरेर आचार संहिताको उल्लंघन गरे । यतिमात्र पनि कहाँ हो र ? नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहितको प्रचार टोली हेलिकप्टमा आएर आचार संहित उल्लंघन गर्ने काम भएको छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रचार टोलीले ओर्गती सम्म हेलिकप्टरमा आएर मोटरमा बुर्तिवाङ आएर आचार संहिता उल्लंघन नगरेको नाटक चाही रचे ।
गुल्मीको ठुलो लुम्पेकमा जीप दुर्घटना, १ महिलाको मृत्यु ५ जना गम्भीर घाईते !
वामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क समितिले जुटायो, ८ लाख बढीको आर्थिक सहयोग !